Kwixesha eliqela kumqolo, enye yeentambo eziphambili zeesanti zabesetyhini zibhothini zamabhinqa. Ngaphezu koko, sele sele benalo uhlobo lwesimo esifanele-esinalo, oko kukuthi, izinto ezifunekayo ukuba zibekho kwiidrobhe zeentombi. Izibhotshi ze-Ankle zifanelekile kakhulu umlenze wesigxina, zivula i-caviar ngendlela engcono kakhulu, ngelixa zilungele iinyawo zazo. Kuzo zombini i-half-season, kunye nehlobo, kunye neebhotile zasebusika.
Phantse bonke abaqulunqi befashoni banikezela ukuhlukana kweebhotile zama-intsuku zokugqoka kwansuku zonke okanye isiganeko. Nangona kunjalo, akwanele ukukhetha ubungakanani obuchanekileyo nombala ofanelekileyo, into ebaluleke kakhulu isitayela engafanelekanga kuyo yonke imilenze. Ukongezelela, xa ukhetha i-botilonovoobazatelno cinga malunga nexesha lakho elizayo lexesha elizayo, kunye nento oya kubakhombisa ngayo kwaye kaninzi kangakanani.
Ngelishwa, ngenxa yokuba iibhola zebhola zifake ebomini bethu bemihla ngemihla kungekudala, abafazi abaninzi abazi indlela yokukhetha ngokufanelekileyo impahla yezi zihlangu. Kukho imfihlelo emininzi malunga nokukhethwa okuchanekileyo kobude kunye nesitayela seengubo.
Nangona ukuba iibhotile ze-ankle ziphantse zonke, akufanele zigqutywe ngamantombazana anamaqatha apheleleyo. Kule meko, ukubaluleka akukona ukuzaliswa kwemilenze, oko kukuthi ubukhulu, ukuba unayo i-ankle eyaneleyo enezandla ezigcweleyo, unokuzikhethela ngokuzikhethela izibhatshi zesikhumba. Kwezinye iimeko, khetha iibhothi okanye iibhothi.
Ukuba awufuni ukuphula umlinganiselo wemilenze yakho, ungagqoki iibhokisi ze-ankle ngamabhuleki okanye i-capris, kunye neengubo ngaphantsi kweedolo. Ngokuqhelekileyo, kukho umyalelo okhethekileyo wokugqoka amabhothi e-ankle: ukuba ingubo ifutshane, ke iibhothi ziphezulu.
Iingubo eziluhlaza okanye ijee akudingeki ukuba zizalise ii-volions, ngokukodwa ukuba zine-bootleg encinci. Oku kuvunyelwe kuphela kwimeko, ukuba iibhotile ze-bhotile zine-bootleg ebanzi.
Iibhendi zeemibala eqaqambileyo zilungele ukujongana neentambo eziqinileyo okanye izithambo ezintoni. Ukongezelela, oku kudibanisa ngokugqithisa imilenze.
Ukuba uthe wadibanisa i-leggings, wongeza uhlobo lokukhanda okanye ukugqoka, kunye nekhwama enkulu. Umzobo onjalo ochanekileyo uya kuba yisisombululo esihle kakhulu ngeentsuku ezibandayo, ngelixa ukhangeleka umzobo kunye nemfashini.
Kwimeko apho ufuna ukuthenga izibhokhwe zesikhumba, ufanele ukhethe ngokucophelela. Izibhotshi zeengqumbo, ezenziwe ngobunzima, ngokungafaneki zikhangeleke. Kungcono ukhethe izicathulo ezinobunini boboya. Kuloo zhemeh ukhetha kwinto yokuba iya kusetyenziswa njengengubo yangaphandle. U-Shuba enoboya obuqaqambileyo kunye neenqindi zeenyawo, ezenziwe ngendlela efanayo, zinokubonakala ziqaqambile kwaye zinobugwili.
Ukuba ungeyikwesaba iindawo eziphakamileyo, khetha iibhola zebhokisi ngeqonga kunye nesithende. Kungcono ukudibanisa iibhotile ezinjalo ngeengubo okanye isambatho somfanekiso oqhelekileyo owenziwe ngoluhlobo lwe-trapezoid. Ebusika, thabatha isambatho esifutshane okanye isambatho somlilo.
Ukugqithisa amabhoti e-ankle ngaphandle kwe-pantyhose kunokwenzeka kuphela kwiimeko ezikhethekileyo. Kufanele ibe ngumzekelo wolu hlobo oluvulekileyo, mhlawumbi ngefayile ejikelezayo okanye eyenziwe yengubo. Ezi ndlela zinokugqithiswa ngeengubo ezilula, iingubo ezimfutshane okanye ibhulukhwe yokukhanya.
Ngokufanelekileyo umfanekiso ochanekileyo we-spinner yingubo eqaqambileyo, i-pantyhose ebomvu kunye neebhotile ezimnyama.
I-Botillons - le nto yinto efanelekileyo yokutya kwintsimbi. Yingakho iifumba zihlanganiswe ngokugqibeleleyo nazo zonke iingubo ezibonakalayo-ipensela okanye ingubo yokugqoka ngaphakathi emadolweni. Kulo hlobo lwama-clockroom aseklasini, iintambo ezineempatheni okanye i-sheen encane iyamkeleka.
Ungathathi indawo izicathulo zangokuhlwa okanye unyawo. Ngomcimbi wokuhlwa okanye uhambo lokuya kwivenkile yokutyela akusiyo ikhethelo ekhethekileyo, mhlawumbi ukhangeleka ungabizi kwaye unengqiqo.
Kodwa ugqoke i-cocktail ukudibanisa neenqindi ze-ankle. Ukwenza oku, khetha iingubo ezincinci zemihlobiso ezenziwe ngeentambo. Kwakhona uhambelane nezibhotshi zeenqaqa ngeeninzi ezincinci, intendelezo evulekile.
Ukuze ubethe i jeans yakho endala, fumana iibhokhwe zama-bhotile ngesithende esikhulu esiphezulu, unokumnyama. Akulunganga ukuba le sihlangu sinaso isitala esidala.
Akunakulungele ukuba i-skirt ebomvu. Olu dibano luya kwenza umfanekiso wakho uphawule kwaye uhlasele. Ukongeza, xa ukhetha izambatho, uthembele kumgaqo wokuba iibhothi ezikhanyayo kunye ne-pantyhose emnyama akufanele zidibaniswe kangcono.
Iibhotile zikhangeleka zidibanisa kunye neemputshane ezimfutshane, nangona kunjalo, kwaye kukho ukuphazamiseka: ngenxa yoko, imilenze ifanele ibe yinto efanelekileyo. Ukugcwala kancinci kwemilenze kwonakalisa yonke into.
Xa ukhetha iibhothi zeenqaqa nenani elikhulu le-maktsentov: ientyatyambo eziqaqambileyo ezinkulu, igolide okanye ameva, akufanele ugxininise kwiingubo zakho, awufuni ukubukeka uyisicwenge. Ngaloo bhutiloni ngokufanayo ukuhlangabezana kakuhle nomsebenzi wokwenza umdla.
Ukuphakama ubude - kulula!
Ziyingozi kwizithende eziphezulu
Ukupheka ukutya okudliwayo kumhla wokuzalwa
Imifuziselo yefestile yezicathulo zamadoda - entwasahlobo-ehlobo 2016
Isonka sinamathele ngegalikhi kunye noshizi
UOlga Pogodina: kwi-cinema ndiyakhathalela yonke into
Izifo ezinqabileyo kakhulu ezintsana
I-Biography ye-actress eyaziwayo u-Elena Zakharova
Isonka sezonkwa saseMelika
Ndiyakuvuyela oogxa ngoMatshi 8
Imeyili enobumba kwiCampu entsha yeKalvin Klein